Polishing igwe, The polis ...
Igwe na-agwụ ike: a na-ejikarị ya eme ihe dị mkpa maka usoro ihe dị mkpa tupu ihe akụrụngwa oyi na-eme ọkpọkọ.
Enweghị ike dochie ya na ụlọ ọrụ nhazi tube, ọkachasị na ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ, ihe nrụpụta akụrụngwa, ikuku ikuku na-akwado ụlọ ọrụ na akụkụ ụlọ ọrụ akpaaka. A na-ejikarị ya eme ihe na tubes na-enweghị ntụpọ, dị ka tube ọla kọpa, aluminom tube, titanium tube, nickel tube, zirconium tube, tube enweghị nkebi, welded anaghị agba nchara tube, extruded anaghị agba nchara tube, okokụre tube okpuru A na-ejikarị ya nwalee mmebi nke ọkpọ okpuru na nrụgide ikuku nke ihe dịka 0.3MPa ~ 0.85mpa, nrụgide mmiri na nrụgide Ikuku nwere uru na ọghọm ya. Igwe na-ekpo ọkụ * * nwere ike ịnwale mpempe 4, na-ekewa ụdị akpaka na ụdị akpaka; akwụkwọ ntuziaka ụdị akwụkwọ ntuziaka nri na ntuziaka blanking ndị kwesịrị ekwesị maka 1m-5m; ụdị akpaka * * na-ahọrọ ụdị akpaka maka ọkpọkọ ogologo ogologo, n'ihi na ihe nnwale dị ogologo ma ọ dịghị mfe ibudata na ibudata.
Mmepe nke nnukwu mpempe akwụkwọ na-ezute na teknụzụ chọrọ igwe igwe
A naghị anabatacha mmecha nke elu nke mpụta nke eriri ẹmbrayo nke aka ẹmbrayo na aka ya. Ọ bụrụ na tube embrayo na-adị oke oke, ọ na-esiri ike ịchọta ihe ndị chọrọ nke igwe na-agagharị. Ebe ọ bụ na akwa ẹmbrayo dị elu nke tub ahụ buru oke oke na ntụpọ ẹmbrayo ahụ miri emi, ọ nwere ike ịhazi ya naanị site na akụrụngwa dị arọ. Na mbido, naanị otu ma ọ bụ abụọ iberibe nwere ike kpụchaa. Mgbe nke ahụ mechara, na-arụ ọrụ arụmọrụ e ukwuu mma na anyị ụlọ ọrụ bara uru mmepụta. Mmepe nke isii, asatọ iberibe na nnukwu dayameta akpụkpọ scrapers bụ ihu ọma kwekọrọ na usoro nke inyefe nkume igwe nri chọrọ.
Rt-50fa nkenke Double-Head Chamfering Machine / Gburugburu tube Chamfering Machine
Inweta kacha ọhụrụ ọnụahịa Hapụ ozi.
Nkeji Iwu / Referensị FOB Ahịa
N'ọdụ ụgbọ mmiri: Shanghai, China
Production ikike: 5000PCS / Afọ
Mentkwụ Tergwọ Okwu: L / C, T / T
Ebe nke Si Malite: Zhangjiagang, China (Chile)
Aha Ahịa: HANRUI
Nọmba nlereanya: Rt-50sm
Ngwongwo ihe: Pipe na Ogwe
Dayameta nke Pipe: 8-50mm
Polishing igwe, The polishing akụrụngwa eji dị iche iche ọrụ nwere ike kere n'ime diski ụdị, eriri ụdị na efere ụdị
The polishing akụrụngwa eji dị iche iche ọrụ nwere ike kere n'ime diski ụdị, eriri ụdị na efere ụdị. Ka ọ dị ugbu a, enwere polis polis na diski iri na abụọ, nke na-egbo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche. Diski polisher bụ ike na-azọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe polishing akụrụngwa na anyị factory ike na-atụ aro maka enweghị nkebi anwụrụ, igwe anaghị agba nchara anwụrụ, titanium anwụrụ, nickel anwụrụ, zirconium anwụrụ na okokụre anwụrụ ọgwụgwọ The ọzọ akụrụngwa bụ belt polishing igwe, nke tumadi emekọ elu imecha na ịbịaru ogo nke tube dị mkpa iji nweta arụmọrụ dị elu na njikarịcha nke ọkpọkọ ahụ.
Mgbawa free igwe
Mgbawa na-enweghị ihe mgbawa: a pụkwara ịkpọ ya igwe titanium pipe cutting machine. O kwesịrị ekwesị ka otu oge ịkpụ na-akpụ nke gburugburu anwụrụ, square anwụrụ na pụrụ iche ekara anwụrụ. Ọ na - anabata usoro nri na - agbanwe agbanwe, na - ejedebeghị na ogologo ogologo ọkpọkọ, nwere nnukwu akpaaka. Ọ nwere ike na-mbubata atọ akụkụ ndịna, na-akpaghị aka mata ọnwụ track, na-ebu si nkenke na elu-ọsọ machining. Ejiri igwe eji arụ ọrụ igwe akụrụngwa akụrụngwa, enwere ike ịhọrọ ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Akụkụ ndị e guzobere site na nhazi laser enweghị akwa, ọnụ ojii, na otu ngwaahịa ahụ nwere nnukwu agbanwe agbanwe.
Centerless polishing igwe
Ogologo oge tụlere usoro kachasị arụpụta maka iwepụ ngwaahịa dị egwu, na-egweri ihe na-enweghị isi na-enye nkwụsịtụ na njedebe zuru oke.
Thedị nke otu dị iche iche sara mbara ma gụnye ihe ndị a:
shafting na ìhè na-apụta
ọkpọkọ na tubing
Tụlee centerless egweri maka tupu sizing gị Ogwe tupu chucker arụmọrụ ma ọ bụ ịghasa igwe akụkụ mmepụta. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji anyị jide size na oyi na-atụ okokụre agba dabara ohiri isi biarin
Anyị nwere ike Mike dum ogologo nke dị n'èzí dayameta ma ọ bụ "eruda Mike" a nzọụkwụ ala ka a nta dayameta na otu n'ime atọ oge chọrọ site cylindrical egweri ụzọ na ndị na-esonụ ihe:
carbon na igwe anaghị agba nchara
aluminom na alloys ya
ọla kọpa na alloys ya
ọla na alloys ya
plastik, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile na-egweri
iko na quartz
Hydraulic press bụ otu n'ime akụrụngwa maka ịnwale ike ịkụ ọkpọ. Omie ụzọ nke akara ihu na radial akara, imeghari ka uwa unsealed carbon ígwè anwụrụ, igwe anaghị agba nchara anwụrụ, titanium alloy ọjà, pụrụ iche ekara eriri igwe, na ndị ọzọ na anwụrụ ịkụ ike ule! Ọ nwere ọrụ nke tupu ule flushing, mgbali ule nnyocha, drainage, wdg PLC akara, elu Ọdịdị, anụ ọrụ.